VIP Gym ( 1 ) | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
VIP Gym ( 1 ) | Hlaing
VIP Gym ( 1 ) ကို Mister Global Myanmar 2015 Winner မင်းလူလူ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး ဖွင့်လှစ်ထားသော Gym ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားလိုသူများ ၊ခန္တာကိုယ်အချိုးအစားသွယ်လျလှပလိုသူများ၊ ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာလိုသူများအတွက် ကျယ်ဝန်းသောအခန်း ၊သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အပြင်အဆင်၊ ခေတ်မှီစက်များ၊ Aircon ၊ CCTV Locker Box၊ Shower room ၊ smoking area၊ သီးသန့်အဝတ်လဲခန်းများ ၊ သင်တန်းဆင်း Gym Trainer များ၏ member များအပေါ် တစ်ဦးချင်းစီ ဂရုစိုက်သင်ကြားပေးခြင်း စသည်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Membership fees မှာ Daily 3000 ကျပ် ၊ တစ်လ 30000 ကျပ် ၊ သုံးလ 80000 ကျပ်၊ ခြောက်လ 150000 ကျပ် နှင့် တစ်နှစ် 250000 ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါသည်။ လိပ်စာမှာ အမှတ် 15 ၊ ပထမထပ် ( အမျိုးသမီးသီးသန့်) ဒုတိယထပ် ( အမျိုးသားသီးသန့် ) ၊လှိုင်ဘူတာရုံလမ်းနှင့် လှိုင်မြစ် ၂ လမ်းထောင့်၊ ( ၁) ရပ်ကွက်၊
လှိုင်မြို့ နယ် ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ မနက် ခြောက်နာရီမှ ညကိုးနာရီအထိဖွင့်လှစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပိတ်ပါသည်။
+9595033606
06:00 AM - 09:00 PM ( ပိတ်သည် တနင်္ဂနွေနေ )
No 15, 1st & 2nd floor, 1 Qtr, Hlaing Railway Station Raod, Hlaing Township, Yangon
VIP Gym ( 1 ) is located at No 15, 1st & 2nd floor, 1 Qtr, Hlaing Railway Station Raod, Hlaing Township, Yangon. VIP gym is established and managed by Mister Global Myanmar 2015 Winner Min Lu Lu in 2015. The gym provides numerous gym services for those who want to gain weight, loss weight, get smart body and many more. Facilities with certified gym trainer, wide room area, nice accommodation, modernized equipment and machines, CCTV, fully air conditioning, Locker Box, shower room, smoking area, changing rooms. Member admission fees for one month is 30000 Kyats,3months for 80000 kyats,6months for 150000 kyats and one year for 250000 kyats per person. Daily fee will cost 3000 kyats. Opening Hours is 6:00 AM to 9:00 PM and Sunday is closed.